(SAWIRRO) Wasiirka maaliyadda dowladda Puntland oo kormeer ku tagay xarumaha ciidanka difaaca Puntland ee gobolka Sool. | puntlandi.com
Friday, August 18th, 2017 | Posted by Pi
(SAWIRRO) Wasiirka maaliyadda dowladda Puntland oo kormeer ku tagay xarumaha ciidanka difaaca Puntland ee gobolka Sool.
Wasiirka Maaliyada Dowladda Puntland Cabdulaahi Siciid Carshe dhaqaaje ayaa maantay kormeer shaqo ku tagay xarumaha ay daganyihiin ciidanka Difaaca Puntland ee gobalka Sool iyo kastamka canshuuraha Turkaraq.
Wasiirku waxaa uu la kulmay masuuliyiinta degmada Tukaraq iyo maamulka maaliyada isagoo ka xog waraystay sida ay u socoto canshhur qaadista degmadu iyo howlaha shaqo ee ka socda.
Wasiir Cabdulaahi ayaa sidoo kale waxaa uu booqday fariisimada ciidamadu ay kaga suganyihiin aagagaas asagoo indho indhayn ku sameeyey qaabka ay ciidamadu ugu diyaar garoobeen difaaca dalka.
Waxaa uu warbixin ka dhagaystay Kornayl Jamcaale Jaamac Takar oo hogaaminaya ciidamada sugun halkaasi isagoo ka xog waraystay xaaladaha ay ku nool yihiin ciidanku.
Kornayl Jamcaale Jaamac Takar ayaa sheegay in wasiirkii Cabdulaahi uu yahay wasiirkii ugu horeeyey ee booqda furimaha ay ku suganyihiin ciidamadu waxaana intaa raaciyey inay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan marwalba.
”Hadii aad ahaan lahayd nin baasaboor ajanabi ah wata noomaadan timaadeen balse waxaad tahay nin daljoog ah”ayuu yiri Kornayl Jamcaale.
Wasiirka Maaliyada Dowladda Puntland Cabdulaahi Siciid Carshe Dhaqaaje ayaa dhankiisa uga mahad celiyey maamulka degmada Tukaraq iyo ciidamada difaaca Puntland,isagoo intaa raaciyey inuu ku dadaalayo sidii ay u heli lahaayeen xuuuqda ay leeyihiin.
”Shacabku waxaa ay ku seexdaan ciidamada anaguna waxaan balan qaadaynaa inaan siino mushaarkooda iyo xaqa ay leeyihiin”ayuu yiri wasiir Cabdulaahi.
Cabdulaahi Siicd Carshe dhaqaaje oo 7-bishaan loo magacaabay wasiirka maaliyada ah wasiirkii ugu horeeyey ee booqda furimaha ay ku suganyihiin ciidanka difaaca Puntland arintaas kor u qaadaysa niyada ciidanka.